image ကိုအကြွေး: Anatoliy Sizov | Getty Images
ရိုးရှင်းရှာဖွေရေး. အရည်အသွေးအတွေ့. အဆိုပါဆေးခြောက်အသိုင်းအဝိုင်းအဘို့သင့်မိတ်ဖက်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပေါ်တယ်.
10 ဇန္နဝါရီလ 20194ပိုပြီးဖတ်ပါ
ထင်မြင်ချက်များ အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်- ဝန်ထမ်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့များမှာ.
ဆက်စပ်: Senioren Zijn de cannabismarkt Weinig bedrijven richten zich op
Waarom de populariteit? Omdat CBD is gevonden om hoofdpijn, spierpijn, menstruatiepijn, နာတာရှည်နာကျင်မှု, angst en zelfs depressie te verlichten. Atleten hebben het gebruik ervan zowel voor als na de training aangenomen.
ဆက်စပ်: Federale Cannabisverbod kreeg veel zwakker in 2018
dispensaries.com အပေါ် Follow ငါ nstagram အကွောငျး အပေါ် အမြင့် နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးခြောက်သတင်းနှင့်အတူနေထိုင်ရန်.